सापकोटाको अध्यक्षतामा एनआरएन डेनमार्कको नयाँ समिती
अगस्ट ३, २००९
गणेश ढकाल/डेनमार्क हिजो भएको गैह्र आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएन) डेनमार्कको पहिलो भेलाले राष्ट्रिय समिति गठन गरेको छ । अध्यक्ष पदका दुई प्रत्यासी सोम सापकोटा र रञ्जन ओझाबिच भएको निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा सोम सापकोटा अत्यधिक मत ल्याएर बिजयी हुनु...
पाठकलाइ प्रश्न, एनआरएन फ्रान्समा कसको भूमिका कस्तो ?
जुलाइ १५, २००९
मैले केहि दिन अघि “अवैधानिक महाधिवेशन गर्दै एनआरएन फ्रान्सको नयाँ कार्य समिति” शिर्षकमा एउटा समाचार छापें । स्वभाबिकै हो, सबैले आफ्नो ईच्छा, स्वार्थ, कामना, सद्भाव अनुसार फरक फरक ढंगले लिए। केहिलाई खुशि लाग्यो लौ अब वास्तबिक कुरो...
अवैधानिक महाधिवेशन गर्दै एनआरएन फ्रान्सको नयाँ कार्य समिति
जुलाइ ८, २००९
नेत्रित्व लाचार, असफल र स्वार्थ प्रेरित भयो भने संस्थाको कतिसम्म अधोगति हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ एनआरएन फ्रान्स । अस्ति आइतबार एनआरएन फ्रान्सको ‘महाधिवेशन’ भयो । तर पुरै अवैधानिक । एनआरएन फ्रान्समा अहिले सय जना जति (महाधिवेशनमा...
अप्रिल १३, २००९
प्रवासी नेपाली भन्ने त धेरै पहिले देखिनै हो सुन्न थालेको । मलाया, हङकङ, बेलायत र बर्मा लगायतका मूलुकमा नेपालीहरु लडाईमा जान थालेपछि यो शब्दले ब्रिहद रुप लिए जस्तो देखिन्छ । तर नेपालबाहिर नेपालीहरु जाने क्रम भने निकै...
महिलाले टोपी लगाएर भाषण ठोकेपछि…………….
मार्च २७, २००९
महिला भेला । मञ्चमा सबै महिला नै महिला । नाम बोलाईयो मञ्चमा उपस्थित हुन भन्दै शोभा चन्द । उनी पछिल्लो लहरतिरबाट उठेर फटाफट आईन । दौरा सुरुवाल लगाएकाले होला सबैले पल्याक पुलुक गरे। कति घाँटी...
महिला सम्मेलनले थपेका चुनौती
मार्च २४, २००९
-मैयाँ कटुवाल- मानविय विकास र भौतिक बिकास नगरिकन हरेक क्षेत्रमा पिछडिएका महिलाहरुमा अधिकार र उपयोग गर्ने चेतना जगाउनुपर्छ । राष्ट्रिय बिकासमा महिलाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । नीति निर्मणको तहमा महिलाको पहुँच हुनु अनिवार्य छ...
नेपालले हामीलाई के दियो ?
मार्च २२, २००९
“यदि नेपालमा जन्मेको बेला त्यहाँका डाक्टरले नहेरिदिएको भए, त्यहाँका छिमेकिहरुले नहेरिदिएको भए, त्यहाँको प्रहरीले तपाईको रक्षा नगरिदिएको भए तपाई त्यहिँ मर्नुहुन्थ्यो । तपाई आज बिदेश आउन पाउनुहुन्थेन । त्यसकारण नेपालले तपाईलाई धेरै गरेको छ ।” ...
आर्थिकरुपले आत्मनिर्भर नहुन्जेल नारी स्वतन्त्रता सैद्दान्तिक मात्र
मार्च १७, २००९
-डा समता प्रसाद महतो “नारी समानताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अवसरको प्राप्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले ३३ प्रतिशत आरक्षणको कुरा भन्दापनि ५० प्रतिशतनै अवसर पाउनेगरि व्यक्तित्वको विकास गर्नुपर्छ । ३३ प्रतिशत मागेर आफुले आफैंलाई किन...
आफ्नै मामाघर जान नपाउने यो कस्तो कानुन ?
मार्च १४, २००९
–सुनीता रोक्का, हंगेरी महिलाका सन्दर्भमा फर्किएर हेर्दा हंगेरीमा हाल जम्मा सात जनामात्रै नेपाली महिला हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये एक नेपाली महिलाको तिब्बती नागरिक, एक महिलाको हंगेरियनसँग बिवाह भएको छ । एक जना महिला वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर गर्दै...
मार्च १३, २००९
–डा उपेन्द्र महतो– म के भन्न चाहन्छु भने गैह्र आवासिय नेपाली भनेको जो नेपाली नागरिक वा उसको आमा, बुवा, बाजे बज्यै नेपाली नागरिक भएको र आज उ बिदेशी नागरिकता लिइसकेको ब्यक्ति यदि चालू आर्थिक वर्षको छ...